Lets Promote The Living Standard of The Pa-Oh People by Education: Pa-Oh National Photo Exhibition In Bangkok
ကရင်ပြည်နယ် ပအိုဝ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ရုံး ဆောက်လုပ်ရေး ဓာတ်ပုံများ၊
ကရင်ပြည်နယ် ပအိုဝ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ရုံး ဆောက်လုပ်ရေး နှိုးဆော်လွှာ
ပအိုဝ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှူအဖွဲ့၏ သက်တမ်းကား ဘာလိုလိုနှင့် အနှစ်(၂၀)ကျော်ခဲ့လေပြီ။ သို့ရာတွင် ရုံးဟူ၍ အတည် တကျမရှိခဲ့ပါ။ အဖွဲ့၏လှုပ်ရှားမှူတစ်ခု စတင်ပြီဆိုသည်နှင့် ရုံးပြင်ကန္နားဟူ၍ သီးသန့်မရှိဘဲ အဆင်ပြေသည့်နေရာတွင်သာ တွေ့ဆုံချိန်းတွေ့စည်းဝေးခဲ့ရသည်ကများပေပြီ။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် အဖွဲ့၏လုပ်ငန်းတာဝန် များပြားလာသည်နှင့်အမျှ ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရုံးအဆောက် အအုံက လိုအပ်လာပါသည်။ အဖွဲ့မှလူကြီးများကလည်း ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်မှာ အတော်လေးကြာလှချေပြီ။ အမှန်တကယ် အကောင်အထည်မဖော်ဖြစ်သေးပေ။ သို့ရာတွင် ဒီနှစ်အတွင်း ဖြစ်အောင်လုပ်မည်ဟူသော သန္ဒိငှာန်ဖြင့် အားစိုက်ထုတ်လုပ်ကိုင်လာရာမှ ယခုဆိုလျှင် အဆောက်အဦး မြေနေရာ၊ ပုံကြမ်းနှင့် အလှူငွေ ထည့်ဝင်သူများဖြင့် ရုပ်လုံးပေါ်လာပေပြီ။ သို့ရာတွင် အဆောက်အဦး ကုန်ကျစရိတ် များပြားလွန်းရကား အပြည့်အစုံအောင်မြင်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ ရှိနေစဲပင်။
အကယ်၍ ရုံးအဆောက်အအုံ ရှိလာပါက အဖွဲ့အနေဖြင့် ပိုမိုစုစည်းလာနိုင်မည်။ စည်းရုံးရေးများကို ထိရောက်စွာ ပိုမိုဆောင်ရွက်လာနိုင်မည်။ ပအိုဝ်းအမျိုးသားတို့၏ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးတို့ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြင့် တစ်စုတစ်စည်းတည်းထောက်ကူပေးလာနိုင်တော့မည်။ စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု သင်တန်းများကို နှစ်စဉ်ဖွင့်လှစ်ပေးလာနိုင်တော့မည်။ နောက်ဆိုလျှင် အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်၍ တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး အနာဂတ်ပအိုဝ်း အမျိုးသားများ၏ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုများ ပိုမိုတိုးမြှင့်လာနိုင်တော့မည် ဖြစ်ပေသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ ထူးချွန်ပအိုဝ်းကျောင်းသားများ မြို့ပြတွင် တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ရန်အတွက် နေရာထိုင်ခင်းအခက် အခဲများစွာရှိပါသည်။ အကယ်၍ အသင်းရုံးပေါ်ပေါင်လာပါက ပအိုဝ်းသက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏ တစ်ထောက်တစ်နေရာ ကွန်းခိုရာနေရာလည်းဖြစ်ပါသည်။
ရုံးအဆောက်အအုံပြီးစီးပါက ရရှိလာနိုင်မည့် အကျိုးကျေးဇူးများက အံမခန်းပင်။ တစ်နည်းအားဖြင့် လက်ရှိအဖွဲ့၏ အနေအထားကိုတစ်ဆင့် မြှင့်တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ အမျိုးကိုချစ်သော၊ ယဉ်ကျေးမှုကိုမြတ်နိုးသော ပအိုဝ်းအမျိုးသားတစ်ဦးအနေဖြင့် အဖွဲ့ရုံးပေါ်ပေါက်လာစေရန်အတွက် အုတ်တစ်ချပ်၊ သဲတစ်ပွင့်အနေဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းကူညီလှူ ဒါန်းကြပါစို့ဟု တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။
လက်ရှိတွင် နာယက(၇)ဦး၊ ဥက္ကဌ(၁)ဦး၊ ဒု-ဥက္ထဌ(၁)ဦး၊ အလုပ်မှုဆောင် (၁၀) ဦးဖြင့် အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို လည်ပတ်နေပါသည်။ အမြဲတမ်းရုံးထိုင်ခြင်းမရှိဘဲ လက်ရှိတည်ဆောက်နေသည့် ရုံးအဆောက်အဦးပြီးစီးမှသာလျှင် ရုံးထိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်တွင် အသင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ နည်းပါးလှသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင်မူ လူအများ၏၀ိုင်းဝန်းပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကြောင့် အဖွဲ့ကြီးမှာ ပိုမိုကြီးမားလာပြီး လုပ်ငန်းဆောင်တာများလည်း များပြားလာပါသည်။
ပအိုဝ်းအမျိုးသားနေ့ နှစ်စဉ် ကျင်းပပေးနိုင်ရန်၊
ကျေးရွာဒေသများကို အခြေခံ၍ စည်းရုံးရေးကို ပိုမိုတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊
ဆင်းရဲ နွမ်းပါး၍ ပညာဆက်လက်သင်ကြားရန် မတတ်နိုင်သော ပအိုဝ်း ထူးချွှန် လူငယ်လူရွယ်များအား နှစ်စဉ် ရှာဖွေဖော်ထုတ်၍ ဆက်လက် ပညာသင်ကြားနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
ရုံးအဆောက်အအုံ ပေါ်ပေါက်လာပါက အနာဂါတ်ကမ္ဘာနှင့် ယှဉ်၍ အိုင်တီ(IT)၊ အင်္ဂလိပ်စာနှင့် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုး ရေး၊ အစရှိသည့် စွမ်းရည်မြင့်သင်တန်းများ ဖွဲ့လှစ်ပေးနိုင်ရန်၊
စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းများ နှစ်စဉ်ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ရန်၊
အခြားသော ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ (INGOs)နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျေးလက်ဒေသပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုက်တက်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက် ရန်၊ အစရှိသည်ဖြင့် လက်ရှိဆောင်ရွက်ဆဲ အနာဂါတ်တွင်လည်း ဆောင်ရွက်ရန် လျှာထားပါသည်။
လက်ရှိတွင် အဖွဲ့၏ အဓိက အရုံစိုက်ဆောင်ရွက်နေသည်မှာ ရုံးအဆောက်အအုံ (သုံးထပ်) လျင်မြန်စွာပြီးစီး လာနိုင်ရေးပင်ဖြစ်သည်။ အချို့သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများမှာ ရုံးအဆောက်အအုံ မရှိခြင်းကြောင့် တွင်ကျယ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ (ဥပမာ-စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း) သို့ဖြစ်၍ ရုံးအဆောက်အအုံ ပေါ်ပေါက်လာပါက ယခုဆောင်ရွက်ချက်များသာမက နောင်အနာဂါတ်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ဆောင်ရွက်ချက်များကို တွင်ကျယ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလားအလာကောင်းများ ရှိနေပါသည်။
အဖွဲ့ရုံးအတွက် အောက်ပါ ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
ဘိလပ်မြေ (၁) အိတ် - ၅၇၀၀ ကျပ် (သယ်ယူခအပါအ၀င်)
သဲ (၁) ကျင်း - ၁၁၀၀၀ ကျပ် (သယ်ယူခအပါအ၀င်)
ကျောက် (၁) ကျင်း - ၂၁၀၀၀ ကျပ် (သယ်ယူခအပါအ၀င်)
အုတ် ( ၁၀၀) - ၅၀၀၀ ကျပ် (သယ်ယူခအပါအ၀င်)
သံ ( ၁) တန် - ၆၇၀၀၀၀ ကျပ် (သယ်ယူခအပါအ၀င်)
ဆက်သွယ် လှူဒါန်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ
ဦးခွန်ဝင်းနောင် (ဘားအံ) - ၀၅၈ ၂၁၉၁၅
ဦးခွန်စံဟိန်း ( ။ ) - ၀၅၈ ၂၁၉၃၀
ဦးခွန်သန်းမြင့် ( ။ ) - ၀၅၈ ၂၂၆၀၉၊ ၀၉၅၆၆၁၀၁၈
ဦးခွန်သန်းထွန်း ( ။ ) - ၀၅၈ ၂၁၉၇၄
ဦးခွန်မြအောင် ( ။ ) - ၀၅၈ ၂၁၃၅၇၊ ၂၁၀၉၁
ဦးခွန်ဘစိန် (ငြိမ်း) ညွန်ကြားရေးမှူး သာသနာရေး ဦးစီးဌာန ရန်ကုန် - ၀၁ ၅၈၃ ၅၉၄
ဦးခွန်မြင့်လွင် (အုပ်ချုပ်ရေးမှူး) ပအိုဝ်းဓမ္မာရုံ ရုံး ရန်ကုန် - ၀၁ ၃၈၀ ၈၉၇
ဦးခွန်သန်းလိုင် (သာမည) မြ၀တီ - ၀၉၈ ၇၂၁၁ ၉၄
Other News & Media Links
You can only view Taunggyi Time site properly, only if you are using Firefox web browser. So, if you do not have Firefox program yet, please Download Firefox here and install it in your computer. Furthermore, in order to be able to read in Burmese, you need to have Zawgyi Font. So, if you do not have Zawgyi Font yet, please Download Zawgyi Font here and install it in your computer.
ပအိုဝ်းဂန္ဓ၀င် ဂီတအနုပညာရှင် ခွန်ခမ်းခြွိုင်
The Music Hutch View Playlist
More Pa-Oh songs on Taunggyitimes (တောင်ကြီးတိုင်းမ်မှ ပအိုဝ်းသီချင်းများ နားဆင်ရန်
More Pa-Oh songs on Pa-Oh People Info (Pa-Oh People Info မှ ပအိုဝ်းသီချင်းများ နားဆင်ရန်
Pa-Oh National Flag's Anthem
Pa-Oh Traditional "Ka Tein" Festival
Pa-O traditional "Ka Tein" festival
Lets Promote The Living Standard of The Pa-Oh Peop...
ကရင်ပြည်နယ် ပအိုဝ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ရုံးေ...
Leave Your Comments Here (မှတ်ချက် ရေးချရန်)
Subscribe To Taunggyitime-Photo